Mudug: Carruur badan oo shuban-biyood uu soo ritay
Cabdiraxmaan Taysiir 29 January, 2016 MUDUG
(ERGO) - Soddon qof oo isugu jira carruur iyo dad da’ ah ayaa shuban-biyood u jiifa xarun caafimaad oo ku taalla deegaanka Bacaadweyne oo 198 km u jira Gaalkacyo. Kiisaska shubanka oo kordhayay tan iyo billowgii bishan ayaa saameynta ugu daran ku yeeshay dadka reer miyiga ah ee ku sugan tuulooyinka aan lahayn xarumaha caafimaadka.
Bishan gudaheeda waxaa shubanka u dhintay 7 carruur ah, sida uu noo sheegay Maxamed Saciid Axmed oo ah xoghayaha maamulka deegaanka Bacaadweyne oo xubno qoyskiisa ka tirsan uu ku dhacay shubanka. “Xaaskeyga iyo afar carruur ah oo aan dhalay oo laga keenay tuulada Gacameey ayuu shubanku ku dhacay oo hadda laga daweeyay,” ayuu yiri.
Shubanka waxaa sababay nadaafadda biyaha ay dadku cabaan oo aan wanaagsaneyn sida uu Raadiyo Ergo u sheegay Yoonis Abshir oo ka mid ah howlwadeennada caafimaad ee isbitaalka Bacaadweyne. “Ceelasha oo biyahoodu ay gabaabsi yihiin waa kuwo afka ka furan, isla markaana meel hoose ka qodan. Waxaa si sahlan gudaha ugu gala qashinka iyo saxarada xoolaha, waana biyaha keliya ee ay dadku heli karaan,” ayuu yiri.
Labo carruur ah oo ay dhashay Ugaaso Cismaan Kaahiye ayaa ka mid ah carruurta jiifta xarunta. Waxay Raadiyo Ergo u sheegtay in carruurteeda oo labo jir iyo saddex jir kala ah uu shubanka ku dhacay 10 maalin ka hor, balse hadda ay xaaladdooda soo roonaaneyso, kaddib markii ay qaateen faleebbooyin iyo dawooyin kale oo ay siisay xarunta oo la dhigay toddobaadkan gudihiisa.
Xarunta caafimaad ee Bacaadweyne ayaa ah mid yar oo ay taageeraan hay’ado caalami ah. “Xaruntu ma dabooli karto baahida caafimaad ee ka jirta deegaannadan,” ayuu yiri Yoonis. Xarunta waxaa adeegyo caafimaad oo lacag la’aan ah u soo doonta bukaanno ka kala yimaada tuulooyin ay ka mid yihiin; Shabeelow, Gacamey iyo Qadcad.
Xoghayaha deegaanka ayaa sheegay inay soo kordhayaan kiisaska shubanka iyadoo lagu jiro xilliga kuleylaha oo badanaaba uu shubanku ku faafo deegaannadaas. Hay`adaha gargaarka ayuu ka codsaday inay u gurmadaan dadka la liita shubanka, gaar ahaan kuwa ku nool tuulooyinka aanay ka jirin adeegyada caafimaadka.